Vadiwa vadzidzi, tichaona zvirevo zveGerman (Konjunktionen) muchidzidzo chino. Makokonati ndiwo mazwi anobatanidza mazwi maviri kana anopfuura pamwechete. Zvibatanidzwa zvinogona kubatanidza kwete chete mazwi asiwo mitsara.
Tinokurudzira kuti unyatsoongorora hurukuro yedu inoshamisa pazvibatanidzwa zveGerman (Konjunktionen). Almancax varairidzi vakagadzirira iwe. Musoro wekubatanidzwa kweGerman ndeimwe yemisoro inoda kudzidziswa zvakadzama maererano nekuumbwa kwakakwana kwemitsara yechiGerman uye kusiana kwemitongo Musoro wezvibatanidzwa zveGerman unowanzo dzidziswa kwete kune vanotanga kudzidza chiGerman, asi kune avo vane zvishoma zvishoma uye zvepakati nhanho chiGerman.
Zvinoenderana nedzidzo yezvidzidzo munyika medu, chete "ve""ileZvibatanidzwa zvishoma zvakaita se ”zvinodzidziswa mugiredhi rechi9 nerechigumi, zvimwe zvibatanidzo zvinodzidziswa mugiredhi rechi10 nerechi11.
Zvino ngatitangei musoro wenyaya unonzi zvibatanidzwa zveGerman. Tichaona zvinonyanya kushandiswa muchiGerman zvine chekuita nemusoro wenyaya yezvibatanidzwa zveGerman. Isu tichavaka mifanidzo mitsara nezveumwe mubatanidzwa uye kupedzisa musoro wenyaya
ChiGerman und chibatanidzwa
Und chinobatanidza : Und zvinoreva "uye". Kushandiswa kwaro kwakafanana neTurkey uye mubatanidzwa. Kushandiswa kwemazwi maviri kana anopfuura, semuenzaniso zviito zviviri kana zvinopfuura, zvipikisheni, mazita, nezvimwe. uye inoshanda kubatanidza mitsara miviri. Semuenzaniso mitsara nezve chiGerman und chibatanidzwa chinopihwa pazasi.
Muharrem uye Meryem kommen.
Muharram naMeryem vari kuuya.
Akadaro naHamza vari kutaura nekuuya.
Iri bhuku uye notibhuku zvakatsvuka.
Das Buch is gelb und rot.
Iri bhuku ndereyero uye dzvuku.
sowohl… .. als connector, sowohl… .. wie connector : Sezvo zvibatanidzwa zviviri izvi zvichireva zvakafanana, takazvibata muchirevo chimwe chete. Zvibatanidzwa zviviri izvi zvinoreva "zvese… .. uye". Mashandisiro avo akafanana. Imwe inogona kushandiswa panzvimbo yeimwe. Tarisa uone mitsara mitsara nezve izvi zvinongedzo pazasi.
Sowohl Efe als Mustafa vanotaura.
Vaviri Efe naMustafa vari kuuya.
Bothmer zvese kufamba uye hurukuro.
Munun'una wangu anotaura zvese chiTurkey neGerman.
Der Ball ist sowohl gelb wie kuora.
Bhora iri rese yero uye tsvuku.
ChiGerman oder mubatanidzwa
oder mubatanidzwa : Oder zvinoreva mubatanidzwa kana (kana). Kushandiswa kwaro kwakafanana neTurkey. Pazasi, isu tinopa mienzaniso mitsara nezve chiGerman oder mubatanidzwa wekushandisa kwako
Die Katze isel gel oder weiß.
Katsi yero kana chena.
Ndiri kuenda kuswera mangwana kana mangwana.
Muharrem spielt Basketball kana singt.
Muharrem anotamba basketball kana kuimba.
Mein Vater kauft das Brot kana das Gebäck.
Baba vangu vanotenga chingwa kana mabhisikiti.
ChiGerman aber mubatanidzwa
aber mubatanidzwa : Mubatanidzwa weAber asi-asi-lakin unodudzirwa muchiTurkey. Iko kushandiswa kwaro kwakafanana neTurkey. Kazhinji inoshandiswa kubatanidza mitsara miviri. Kana uchibatanidza mitsara miviri pamwe chete, komma inoshandiswa pamberi pesungano yeaber. Semuenzaniso mitsara yakagadzirirwa nesu nezve chiGerman aber mubatanidzwa inowanikwa pazasi
Auto Auto is grün, aber das Rad ist blau.
Mota yakasvibira asi bhasikoro rebhuruu.
Sisi vangu vari kutaura asi havasi kuteerera.
Ndinofarira kuverenga mabhuku asi handidi kuteerera mimhanzi
Ndinogona kufamba asi kwete kumhanya.
ChiGerman sondern chibatanidzwa
yekupedzisira yekubatanidza : Izwi remubatanidzwa, pane zvinopesana, rinoreva zvinopesana. Inobatanidza mitsara miviri. Unogona kuwana zvirevo zvemuenzaniso zvakanyorwa nechikwata chealmancax nezve mubatanidzwa wekupedzisira.
Der Tisch is nicht blau, sondern rot.
Tafura yacho haina kuita bhuruu, asi tsvuku.
Ahmet ist nicht im Garten, yekupedzisira er ist in der Schule.
Ahmet haasi mugadheni, pane zvinopesana ari muchikoro.
Das ist nicht Ahmet, wekupedzisira Hasan.
Iyi haisi Ahmet, pane kudaro, ndiHasan.
Amai vangu havasi kuuya, pane kudaro, vava kuenda.
ChiGerman denn chibatanidzwa
denn chinongedzo : Mubatanidzwa waDenn zvinoreva nekuti unowanzobatanidza mitsara miviri. Iyo almancax timu yakagadzirira mimwe mienzaniso mitsara nezve iyo German denn mubatanidzwa iwe. Wongorora zvirevo pazasi.
Handisi kukwanisa kumhanya nhasi nekuti ndaneta.
Ndiri kudikitira nekuti ndiri kutamba nhabvu.
Lara kann kein Auto kaufen, uye handiti hat hatisi Geld.
Lara haakwanise kutenga mota nekuti haana mari.
Handiravi mabhuku nekuti handifarire kuverenga.
Vadiwa vadzidzi, mazwi kana zvirevo zvatinoti maconjunctions zvinobatsira kubatanidza mitsara pamwechete. MuchiGerman Conjunctionen Iwo emhando dzakasiyana zvichienderana nemitsara yavari uye akapatsanurwa. Zvimwe zvibatanidzo, kunyanya muchiGerman, hazvina zvakafanana neTurkey.
Tisati tapedza iwo musoro weGerman Conjunctions, isu tinopa ruzivo rwakadzama uye mashoma matafura eshamwari dzepamberi. Shamwari dziri kungotanga kudzidza chiGerman kana kudzidza zvirevo zveGerman hazvidi kuwana ruzivo rwunotevera. Ruzivo rwatakapa pamusoro rwakwana. Zvino, ngatipei imwe pfupi ruzivo nezve mhando dzechiGerman kubatana.
Masanganiro Anoparadzanisa Mazwi eiyo Rudzi Rumwe (Nebenordnende Conjunctionen)
Zvibatanidzwa zveboka iri zvine chekuita nekubatanidza mhando imwechete yemazwi kana mitsara. Zvivakwa zvemitongo zvakafanana nemutsara wekutanga.
Chibvumirano cheGerman Zvinoreva muTurkey
sondern pane zvinopesana / pane
uye ve kana Iyo inoshandiswa isina makoma apo ichisarudzika yezvikamu zvinosunga.
denn aber sondern doch Kana yashandiswa, mitsara inopatsanurwa nemakoma
aber sondern doch zvisungo zvinoshandiswa kupatsanura mitsara yakakosha.
denn Mubatanidzwa unoshandiswa chete kubatanidza mazwi kana zvirevo mumutsara mukuru.
Chimwe chiitiko ndechekuti kana chidzidzo kana chiito chinoshandiswa mumutsara wechipiri zvakafanana, kudzokorora hakudiwe.
Sentensi ine Kupfuura Inopfuura Imwe Chirevo
Masanganiro eboka iri anobatsirawo kubatanidza mazwi erudzi rumwe chete. Nebenordnende Conjunctionen vanoverengerwa muboka. Izvi zvinowanzoshandiswa muchiGerman zvakanyorwa pazasi.
entweder… oder ko nezve ... ya
sowohl… als auch Kunze kweiyo
weder… noch ambuya
zwar ... aber … Asi…
nicht nur… sondern auch kwete chete… asiwo
Masanganiro Anoparadzanisa Mhando dzakasiyana dzeMazwi (Unterordnende Conjunctionen)
Zvibatanidzwa zveboka iri zvine basa rekubatanidza mitsara yakakosha nemitsara yepasi. Pane mutemo wekuparadzaniswa nemakoma mumitsara yakadaro.
nachdem mushure maizvozvo
kure kure kusvikira zvino
ob kana iri kana kwete
vous saka / ye
kuripwa panguva / nguva
da -nekuda kwe
solange … Chero paine
seit / seitdem kubvira
Inoshandiswa sechibatanidza chivakashure mazwi;
Chirevo cheGerman Zvinoreva muTurkey
genauso nzira imwe
ipapo mushure / mushure meizvozvo
zvikoz nyangwe zvakadaro
Shamwari dzinodikanwa, urwu ndirwo rwese ruzivo rwataizokupa iwe pamusoro wenyaya yezvibatanidzwa zveGerman. Isu takaona ese ari maviri anonyanya kushandiswa maunganidzwa echiGerman pamusoro uye takaita mizhinji mitsara yemitauro inoenderana neizvi zvibatanidzwa Seboka re almancax, isu tinoramba tichikugadzirira zvemukati zvemukati iwe zvausingakwanise kuwana chero kupi. Iwe unogona zvakare kugadzira mitsara yakasiyana iwe pachako uye nekuvandudza mutauro wako wekune dzimwe nyika zvichienderana nemuenzaniso mitsara yechiGerman pamusoro.
# ChiGerman und chibatanidzwa
# German sowohl… .. als connector, sowohl… .. wie connector
# ChiGerman oder mubatanidzwa
# ChiGerman aber mubatanidzwa
# ChiGerman sondern chibatanidzwa
# ChiGerman denn chibatanidzwa
# Masanganiro Anoparadzanisa Mazwi eiyo Rudzi Rumwe (Nebenordnende Conjunctionen)
# Sentensi ine Kupfuura Inopfuura Imwe Chirevo
# Masanganiro Anoparadzanisa Mhando dzakasiyana dzeMazwi (Unterordnende Conjunctionen)
Kwete: Isu tinogara tichiedza kukupa ruzivo rwezvino. Ichi chinyorwa chauri kuverenga chakatanga kunyorwa dzinenge mwedzi 9 yapfuura, munaKurume 17, 2021, uye chinyorwa ichi chakapedzisirwa kuvandudzwa musi wa20 Kubvumbi 2021.
German Envelopes, German Markers
Verben Mit Präpositionen (Verbs Inoshandiswa muZvirevo)
ChiGerman Nguva Adhimoni
Makondinendi eGerman, Mazita eGerman Makondinendi
Mazita Akabatana muchiGermany, Zita Ronganisa